भरतमोहनजीसँग तुलनायोग्य नेता छैनन्
२०७५ फागुन ३० गते १७:०७
भरतमोह अधिकारी व्यक्तिका हिसाबले असल मान्छे हो हुनुहुन्थ्यो । आजभोलि फरक विचार वा मत राख्ने अरुप्रति शक्तिमा भएकाहरुले असहिष्णु व्यवहार देखाउने प्रवृत्ति छ । तर, उहाँमा मैले कहिल्यै त्यस्तो दरिद्र स्वभाव देखिन । उहाँमा पक्ष/विपक्ष सबैसँग असल सम्बन्ध राख्नसक्ने क्षमता थियो । अर्थमन्त्रीका रुपमा...
भरतमोहनको जस्तो बजेट !
२०७५ फागुन ३० गते ११:४६
‘एकदिन म मन्त्रालयमा बसिरहेको थिएँ’, अर्थसचिव रामविनोद भट्टराई आएर भन्नुभयो– ‘मन्त्रीज्यू, हजुरले साह्रै राम्रो कार्यक्रम ल्याउन थाल्नुभयो । तर, एउटा समस्या आयो । यो वृद्धभत्ता कार्यक्रममा कति रकम विनियोजन गर्ने ? त्यो बजेटमा लेख्न नसकिने भयो । किनभने, देशभरि ७० वर्षदेखि माथिका बृद्धबृद्धा नागरिक...
भीम रावललाई केपी ओलीले यसरी फर्काए जवाफ
२०७५ फागुन २७ गते १८:३६
आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को १८ औं वार्षिक उत्सव अथवा सुरक्षा परिषद् आफ्ना १८ वर्ष पूरा गरेर १९ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । सुरक्षा परिषद्लाई ह्याप्पी बर्थडे भन्नुपर्ला । हामी सुरक्षा परिषद्को वार्षिक उत्सवमा यहाँ जम्मा भएर, सहभागी भएर उत्सव मनाइरहँदा हामीले सुरक्षा परिषद्को अर्थ, त्यसको...
सिके राउतबाट अझै खतरा, ढुक्क नबनाैं !
२०७५ फागुन २७ गते १२:१३
सरकार र सिके राउत समूहका बीचमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सहमति भएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको पक्ष र विपक्षमा रहेर बहस गर्नुभन्दा भावी सम्भावना र जोखिमका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । सरकार समर्थक पक्षले सहमति–पत्र पढ्दै नपढी समर्थन गरिहाल्ने र विपक्षीले सरकारको प्रयासलाई...
बाबुरामको नयाँशक्ति छोड्ने पूर्वअभ्यास !
२०७५ फागुन ९ गते ११:१९
भूतपूर्व कामरेड एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईज्यू, नमस्कार । कर्णाली प्रदेश प्रवेशको क्षणमा दौरा, सुरूवाल, कोट र टोपी अनि एडिडाज जुत्ताको पोशाकमा ठाँटिएको देखें । खुशी लाग्नुपर्ने बेग्लै कारण होइन, क्रमशः बदलिनु भएकोमा सामान्य नै लाग्यो । तपाईको बौद्दिकता, सरलता, गंभीरता, निरन्तर...
२०७५ फागुन ५ गते १२:४५
कुरा आजभन्दा चानचुन ३ सय बर्ष पहिलेको हो । संयुक्त अधिराज्यको सामाजिक राजनीतिक अवस्था विचित्रको थियो । समाजमा चरित्रलाई अत्याधिक महत्व दिइन्थ्यो । समाज कूल घराना, गरिव र असहायका बीचमा विभक्त थियो । चरित्रलाई प्रधान ठान्ने समाजमै वेश्यालय व्याप्त थिए । तिनै वेश्यालयबाट प्रतिष्ठित...
तोरी र कोदोको मिश्रण जस्तो नहोस् नेकपा !
२०७५ फागुन ३ गते १३:२५
बाध्यता या कर्मले, थुप्रै हण्डरथक्कर पश्चात जीबनको आधा बसन्तमा बाँकी जिन्दगी सँगै बिताउँने भनि अधबैँसे जोबन साटेका दम्पति जस्तै हो यो पूर्व माओबादी र पूर्व एमालेको समिकरणबाट बनेको वर्तमान नेकपा(नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी) । ति अधबैँसे दाम्पतिले आफ्नै खालका पुर्वार्ध सुखदुखहरू दुबैले स्वीकारेर नगए सम्म...
एकपटक पढ्नैपर्ने ज्ञानेन्द्रको माघ १९ को घोषणा (पूर्णपाठसहित)
२०७५ माघ १९ गते ११:४३
राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ माघ १९को शाही घोषणा “प्यारा देशवासीहरू, १. श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट प्रारम्भ गरिबक्सेको एकीकरण अभियानबाट निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यमा लोकसम्मतिको आधारमा शासन व्यवस्था चलाउन हाम्रा पूर्वजबाट ऐतिहासिक महत्वका क्रान्तिकारी पाइला चालिबक्सेर देश र जनतालाई उज्ज्वल भविष्यप्रति आलोकित गरिबक्सेको सर्वविदितै छ।...
टैगोरको शान्ति निकेतनबाट गोविन्द केसी र केपी ओलीलाई हेर्दा…
२०७५ माघ १७ गते १४:०५
अनसनमा मरेकाहरूको शृंखला लामो छ । बीपी कोईराला २९ वा २१ दिनसम्म अनसन बस्नु भयो । शताब्दीऔं सम्मका लागि तिरस्कारका पात्र बनाईएका तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई रिहा गरि दियो । तर, आयरल्याण्डको मागका लागि संसार मै लामो समयसम्म अनसन बसेका बबी सैंड्स अनसनरत् नै...
माफ गर्नुहोला, म राष्ट्रवादी होइन् !
२०७५ पुष १० गते १५:२७
राष्ट्रवाद भनेको आफैंमा नश्लवादी चिन्तन हो । अमेरिकाका डोनाल्ड ट्रम्प हुन्, भारतका नरेन्द्र मोदी हुन् वा नेपालका केपी ओली, सबैभन्दा राष्ट्रवादको स्रोत नश्लवाद नै हो । यस्तो राष्ट्रवादले आफूलाई श्रेष्ठ देखाउन सत्रुको निर्माण गर्छ । ट्रम्पले अश्वेत र आप्रवासीलाई सत्रु बनाए । मोदीले पाकिस्तान...
प्रकाश दाहालको चर्चित लेखः स्मरण होस् ! म प्रचण्डको लडाकु कार्यकर्ता हुँ
२०७५ मंसिर ४ गते ११:५१
मेरो नाम प्रकाश दाहाल हो । नेकपा मोआवादी केन्द्रको अधिवेशन आयोजक समितिको सदस्य । नयाँ परिचय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालय सदस्य । यसबाहेकका अन्य परिचय गौण छन् । मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारहरु यी परिचयका अगाडि गौण छन् । म माओवादीको निरन्तर लडिरहने एउटा योद्धा...
‘प्रकाश ! हाम्रो प्रेमको चिनोले बुवा भन्न, तिम्रो तस्वीरलाई म्वाइँ खान्छ, अनि मलाई पटकपटक रुवाउँछ…!’
२०७५ मंसिर ३ गते १३:३८
प्रकाश तिमी हिलोमा फुलेको कोमल थियौ । हिलोमा फुलेको सुन्दर कमलको फूललाई दुनियाँले टिपेर हातमा खेलाउने चाहना राख्छन् । टिप्न नसकेपछि ढुङ्गाले हानेर धुजाधुजा पार्न खोज्छन्, तिमी थियौ त्यस्तै । नेतृत्वलाई सिध्याउन गरिएका लाखौं प्रयासहरु तिमीमा केन्द्रित हुन्थे । आम मान्छेजस्तै तिमी पनि सामान्य...
« अघिल्ला 1234… 68 पछिल्ला »